I-Apple TV + bhanyabhanya bhanyabhanya iWolfwalkers iphumelele amabhaso amahlanu ka-Annie | Ndisuka mac
Ukuhamba kwangoko Iindaba zokutyunjwa kwefilimu ephathekayo zaxhuma eyayiqala ukuboniswa kwiApple Tv +, eWolfwalkers, kwiAnnie Awards. La ngamabhaso anikwa yi-International Animated Association, eseLos Angeles, California, ukusukela ngo-1972. Ekuqaleni zazidalelwe ukuwonga iifilimu ezikwinkalo yoopopayi, kodwa ekuhambeni kwexesha ziye zongezwa iindidi ezintsha, zinikezela ngeemveliso zikamabonakude kunye iimidlalo yevidiyo. Ngoku siyayazi loo nto Akaphumelelanga ngaphezulu nangaphantsi kwamabhaso amahlanu.
Ifilimu yoopopayi esinokuyibona kwiApple TV +, iWolfwalkers, iphumelele amabhaso amahlanu ka-Annie. Unyulo lwatsiba ekuqaleni kuka-Matshi. Ngoku emva kwenyanga enesiqingatha sinokuthi ifilimu ikhokelela kwi-Apple TV + amabhaso amahlanu. Ngale ndlela kunokuthiwa umbono wokuba iApple ibisoloko unayo ukubheja kumgangatho endaweni yobungakanani, nangona oku kubaluleke kakhulu.
Amabhaso anikezelwa emva komsitho obonakalayo. Ithathe i Amabhaso alandelayo:
Eyona bhanyabhanya yeNqaku Independiente
Uyilo olugqwesileyo Abalinganiswa
Esona sikhokelo sihle
Eyona mveliso yoyilo ilungileyo
Ukusebenza kweZwi ngokugqibeleleyo.
Ngoku, kufuneka icaciswe ukuba ifilimu nayo iphumelele ibhaso le-AFI FEST. Inikwe igama njengeyona bhanyabhanya ibalaseleyo yamaqela abagxeki. Apho iApple sele iphumelele amabhaso ali-105 kunye nama-358 atyunjiweyo ukuza kuthi ga ngoku, kubandakanya amagama atyunjiweyo eOscar, ukusukela oko kwaqala kwiApple Originals kwisithuba esingaphezulu konyaka odlulileyo.
Ukusetwa ngexesha leenkolelo kunye nomlingo, umzingeli osemncinci, uRobyn Goodfellowe, uya eIreland kunye noyise ukuba athathe umthwalo wokugqibela weengcuka. Njengoko ujonga umhlaba owalelweyo ngaphandle kweendonga zesixeko. URobyn uba ngumhlobo wentombazana ekhululekileyo, uMebh, ilungu lesizwe esingaqondakaliyo esinamahemuhemu okuba sinayo Amandla okuguqula iingcuka ebusuku. Ngelixa ekhangela umama kaMebh olahlekileyo, uRobyn ufumanisa imfihlo emsa phambili kwilizwe elinomtsalane leWolfwalkers. Uba semngciphekweni wokuba yeyona nto utata wakhe anikwe uxanduva lokuyonakalisa.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » Iimveliso ze-Apple » Apple TV » I-Apple TV + bhanyabhanya bhanyabhanya iWolfwalkers iphumelele amabhaso amahlanu ka-Annie